Vivo S1 Pro wuxuu yimid Hindiya Janaayo 4 | Androidsis
Vivo waxay leedahay mid ka mid ah suuqyada muhiimka ah ee ka baxsan dalka uu degan yahay. Sannadkii la soo dhaafay, Hindiya waxay noqotay dhul iibkiisu si weyn u koray, sidaa darteedna waxaa jira noocyo badan oo gaadha dukaamada iyo hawlwadeennada dalka.
El Waxaan ku noolahay S1 Pro waa suurtagal in la helo in muddo ah ShiinahaIyadoo ay taasi jirto, waxaa jira dad badan oo xiiseynaya inay awoodaan inay ku kasbadaan meel ka baxsan Aasiya oo dadka reer Yurub ay ka heli karaan dukaamo khaas ah. Qalabku wuxuu leeyahay astaamo taleefan oo heer sare ah oo leh qiimo lagu go'aaminayo horaanta bisha Janaayo.
Shirkadda ayaa daabacday boodhadh ay ku daabacday barta rasmiga ah ee Twitter Hindiya oo leh taariikhda Janaayo 4 sida taariikhda iibka. Waxay qaadatay waqti dheer, dhammaan kadib bilooyin shaqo oo ka socday warshadaha si loo helo keyd ku filan oo lagu iibiyo dukaamada iyo xarumaha.
Tilmaamaha S1 Pro
Vivo S1 Pro waxaa ku shaqeeya processor kale Midka laga bilaabay Shiinaha, kiiskan Hindiya wuxuu adeegsanayaa Snapdragon 665 halkii uu ka isticmaali lahaa Snapdragon 675 iyo 6.38-inch FHD + Super AMOLED panel. In kasta oo ay taasi jirto, awoodda lama ogaan karo wax badan oo ku saabsan aragtida koowaad.
Dareemayaasha ay adeegsatay shirkaddu waa 48 megapixels, 8 megapixel ultrawide, makro kale oo 2MP ah iyo dareeraha qoto dheer ee 2MP. Kaamirada sawir-qaadaha (selfie camera) waa 32 megapixels oo hoosta guddi-hoosaadka waxaan ka heleynaa sawir-qaadaha sawirka faraha si loo xaqiijiyo biometric-ka.
El Kabaha S1 Pro ee leh nidaamka Funtouch OS 9.2 iyada oo ku saleysan Android Pie, tan waa inaan ku darnaa 8 GB oo RAM ah, 128 GB oo keydinta gudaha ah isla markaana la ballaarin karo illaa 256 GB iyada oo loo marayo MicroSD. Batariga uu isticmaalay taleefankan casriga ahi waa 4.500 Mah, kaas oo
Waxaan ku dallaci doonnaa USB-C waxayna taageertaa 18W xawaareyn degdeg ah.
Waxay ku imaan doontaa Hindiya midabada Fancy Sky iyo Blue, sidaa darteed waxay meesha ka saareysaa Knight Black ugu yaraan xilligan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Vivo S1 Pro waxay timid Hindiya Janaayo 4